भिमादमा राजनीतिक संरक्षणमा टोले गुन्डाको दादागिरी — donnews.com
क्राईम–न्यूज डन न्यूज खोज प्रमुख समाचार राजनीति
'तनहुँ प्रहरी निरिह, भिमादमा प्रहरीमाथि नै जाईलाग्छन् टोले गुन्डाहरु'
तनहुँ । तनहुँ जिल्लाको मध्य–पश्चिम क्षेत्रमा फैलिएको भिमाद नगरपालिका यतिबेला केही टोले गुन्डाका कारण आतंकित बन्न पुगेको छ । राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले र कांग्रेसबाट संरक्षण प्राप्त हुँदा टोले गुन्डाहरुले आतंक मच्चाई रहेका छन् ।
लागूपदार्थ सेवन गरी भीमाद बजार नै आतंकित हुने गरी सर्वसाधारणको घरको सिसा फुटाउने र झैझगडा गरिरहँदा पनि प्रहरी टुलुटुलु हेर्न विवश छ । उल्टै टोले गुन्डाहरुले त्यहाँ पुगेका प्रहरीमाथि नै जाई लाग्दा समेत आजसम्म तनहुँ प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
टोले गुन्डा रसिद मियाँ कांग्रेस प्रवेश गर्दै गर्दाको फाईल तस्विर ।
त्यस ठाउँमा थोरै संख्यामा रहेका प्रहरी ती टोले गुन्डाका अगाडि जहिले पनि निरिह सावित भईरहेका छन् । राती नदी तथा खोलाहरुको उत्खनन् गर्दा रोक्न पुग्ने प्रहरीलाई उल्टै टोले गुन्डाको समूहले लखेट्ने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । आजसम्म पनि त्यहाँ प्रहरीले ढुक्कसँग सवारी चेकजाँच गर्न सकेको छैन । बिना हेलमेट र तीनजनासम्म टोले गुन्डाहरु लागूऔषध सेवन गरी मनपरी गर्दै बाईक कुदाउँदा समेत ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले रोकेर कारवाही गर्न सक्ने स्थिति नैं नरहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
टोले गुन्डा सुरज नेपाली, भिमाद नगरपालिकाका मेयर मेखबहादुर थापा र एमालेका नेता किरण गुरुङसँग ।
असार ७ गते मंगलबार मध्यरातमा मच्चाईएको आतंकले यतिबेला भिमादवासी झनै त्रसित भएका छन् । त्यस दिन राती साढे ११ बजे शितलचौतारी भन्ने स्थानमा मदिरा सेवन गरी बसेका बाघटारका युवा समुह र भिमाद कै अर्को समूह बिच झडप भएको थियो । झडपमा एक समुहको नेतृत्व गरी आएका म्यादे गाउँपालिकाका अमर राना माथि खुकुरी प्रहार भएको थियो ।
रानामाथी आक्रमण भएपछि उनी पक्षधर करिव एक दर्जन अराजक युवाहरुको समुहले मध्यरातको समयमा भिमाद बजारको केन्द्रबिन्दु मैं रहेको रत्नचोकमा स्थानीयवासीको घरहरुमा ढुङ्गामुढा गरी झ्याल तथा ढोकाहरु फुटाएका थिए । स्थानीयवासीले खवर गरेपछी आइपुगेको ईलाका प्रहरी कार्यालय भिमादको टोली माथी नैं ती टोले गुन्डाहरु जाई लागेका थिए । जहिल्यै पनि त्रसित अवस्थामा रहेको प्रहरी टोलीले आफैंमाथि आक्रमण हुँदा समेत कसैलाई पक्राउ गर्न सकेन र थप मद्दतका लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौतारालाई गुहार माग्न पुग्यो । त्यतिबेलासम्म टोले गुन्डाहरु त्यहाँबाट भागिसकेका थिए ।
रत्नचोक मैं भाडामा बस्दै आएका बाघटार युवा समुहका सुरज नेपाली बस्ने घरका अतिरिक्त सो वरपरमा ५ वटा घरमा मध्यरातमा ढुङ्गा हानिएको थियो । मध्यरातको समयमा भिमाद बजार नै आतंकित हुने गरी मदिरा सेवन गरेका टोले गुण्डाहरुले तोडफोड गर्नुका साथै अपशब्द र अश्लिल गाली सुन्नै नसकिने गरी बर्षाएका थिए । यसरी मध्यरातमा आतंक मच्चाउने घटनाको नेतृत्व केही समय पहिले मात्रै कांग्रेस प्रवेश रसिद मिया र आफुलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको अभियन्ता बताउने मनोज ज्वाहरचनले गरेका थिए । सो घटनामा मालेबगरका प्रताप श्रेष्ठ, बिष्णु थापा क्षेत्री र प्रताप मल्ल लगायतको संलग्नता रहेको थियो ।
‘आधा दर्जन टोले गुन्डाका कारण त्रसित छ भिमाद बजार’ : यो टोले गुन्डाको समूहलाई तत्कालै नियन्त्रणमा नलिने र यिनीहरुलाई राजनीतिक संरक्षणबाट नअलग्याउने हो भने गुन्डागर्दी झनै मौलाउँदै जानेछ । भिमादमा गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्न प्रहरीको संख्या बढाउनुका साथै यिनीहरुको हरेक धन्दामा निगरानी र कारवाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।
घटनाको केही समय पछि बेलचौताराबाट थप टोली आएता पनि सो समयमा घटनामा संलग्नहरु भागिसक्नु र हालसम्म घटनामा संलग्न कोही पक्राउ पर्न नसक्नुलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय भिमादको निरीहता हो वा गुण्डा संरक्षणमा संलग्नता भन्नेमा स्थानीयवासीले प्रश्न उठाई रहेका छन् । राजनीतिक दवावका कारण प्रहरीले पक्राउ नगरेको हो कि भन्ने प्रश्नमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख एसपी अरुण पौडेलले भने–‘जसका विरुद्धमा हामीले जाहेरी लिएर बसेका छौं, नत्र त जाहेरी लिन पनि मान्थेनौं होला नि त ? झगडामा सामेल हुने दुईवटै समूहलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउनु भनेर निर्देशन दिई सकेको छु । भागेर यिनीहरु सधैं कहाँ बस्छन् र ? सधैं भरी भागे भने त त्यहीँ सजाय नै भयो नि ?’
काङ्ग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल, ऋषिङ गाउँपालिका तनहुँका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठसँग टोले गुन्डाहरु प्रताप श्रेष्ठ र बिष्णु थापा क्षेत्री ।
ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठलाई घटनामा संलग्न टोले गुन्डाहरु प्रताप श्रेष्ठ, रसिद मिया र बिष्णु थापा क्षेत्री लगायतका टोलीलाई संरक्षण गर्दै आएको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन् । यस विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने–‘ नजिकको कार्यकर्ता त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर अपराध गर्नेलाई कसले संरक्षण गर्छ । मेरो आफ्नो मान्छे होस् वा पार्टीको मान्छे होस् । अपराध गर्ने र नचाँहिदो काम गर्ने मान्छेलाई हामी कहाँ संरक्षण गर्छौं र ?’
भिमाद नगरपालिका तनहुँका मेयर मेखबहादुर थापालाई टोले गुन्डा सुरज नेपालीलाई संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस विषयमा मेयर थापाले भने–‘३८ हजार जनसंख्या सबै मेरा जनता हुन् । गल्ती गर्ने मान्छे मेरो कोही हुँदैन । मेरो छोरा पनि हुँदैन । मेरो स्वास्नी पनि हुँदैन । म संविधान अनुसार चल्ने मान्छे हो । सुरज भन्नेले गल्ति गरेको छ कि छैन प्रहरीसँग भेरिफाई गर्ने हो, मसँग होइन ?’
टोले गुन्डा सुरज नेपाली एमालेका नेता किरण गुरुङसँग
भिमाद बजारमा यस अघि पनि यी टोले गुन्डाहरुले आमसर्वसाधारणलाई आतंकित र भयवित बनाउँदै आईरहेका थिए । यस विषयमा स्थानीयवासीले प्रहरीलाई यस्ता गलत क्रियाकलापहरु नियन्त्रणमा लिन पटक–पटक अनुरोध गरे पनि प्रहरी प्रशासनले वेवास्ता गर्दै आईरहेको थियो । एकातिर राजनीतिक संरक्षण र अर्को तिर स्थानीय ठाउँमा प्रहरीको न्यून उपस्थिति यी दुवैको फाईदा उठाउँदै भिमाद क्षेत्रमा टोले गुन्डाहरुको अराजकता बढ्दै गईरहेको छ ।
समयमा नैं यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले थप प्रहरीको संख्या बढाउनु पर्ने देखिन्छ । साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा आउने प्रहरी प्रमुखले बेला–बेलामा यस ठाउँमा अनुगमन गर्ने गरिदिए सुरक्षित भएर बाँच्न पाईन्थ्यो कि भन्ने आशा स्थानीयवासीले गरेका छन् । अहिले झडप गरेका टोले गुन्डाहरु ठेक्कापट्टा लगायतका धन्दामा एक भएर काम गर्छन् । कुरा नमिल्दा आ-आफैं झगडा गर्ने यिनीहरुले सर्वसाधारण जनतामा आतंक सिर्जना गराएका छन् ।
यतिबेला तनहुँ प्रहरी प्रमुख परिवर्तन भएको अवस्था छ । अब आउने प्रहरी प्रमुखले सबैभन्दा पहिला यो ठाउँका जनतासँग यस विषयमा बुझ्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने आशा स्थानीयवासीहरुले राखेका छन् । हेरौं, अब आउने तनहुँ प्रहरी प्रमुखले टोले गुन्डाको आतंकबाट त्रसित जनताको गुनासो सुन्छन् कि तनहुँको सदरमुकाममा मात्र बसेर शान्ति सुरक्षाको रटान दोहोर्याउछन्, त्यो प्रतिक्षाको विषय नै रहेको छ ।